Karnalikhabar » एक स्ट्याटसको आधारमा साझा सवालमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधिएका प्रश्न प्रायोजित भन्नु कति न्यायोचित? एक स्ट्याटसको आधारमा साझा सवालमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधिएका प्रश्न प्रायोजित भन्नु कति न्यायोचित? – Karnalikhabar
एक स्ट्याटसको आधारमा साझा सवालमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधिएका प्रश्न प्रायोजित भन्नु कति न्यायोचित?
प्रकाशित मिति :2017-07-07 19:05:35
असार २३ । साझा सवालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अन्तर्वार्ताले ल्याएको तरंग अझै सेलाएको छैन । जनताले सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यसरी दिन नहुने भन्दै मानिसहरुले देउवाको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।
कतिपयले बिबिसीको साझा सवाल भनेको विदेशी एनजिओले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भएकोले त्यसमा सोधिने प्रश्न, पात्रहरु प्रायोजित हुन्छन् भनेर दावी गरिरहेका छन् ।
बिबिसी साझा सवाल के वास्तवमै प्रश्न र पात्रहरु प्रायोजित हुन्छन् त ? कार्यक्रममै सहभागी भएकी एक युवती जसको नाम सुुरुची पन्त हो । उनले आफ्नो फेसबुकमा यो तथ्यको रहस्योद्घाटन गरिदिएकी छन् ।
सुरुचीले आफ्नो स्टाटसमा लेखेकी छन्, ‘ म बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको साझा सवालको ५००औं अंकमा सहभागी भएको व्यक्ति हुँ । म लगायत ६५ जना सहभागीलाई आयोजकले प्रश्नको फारम प्रदान गरेका थियो । जहाँ म लगायत सबैले के प्रश्न सोध्ने भनेर उक्त फारममा भरेको हो । कार्यक्रम बिहान ९ बजे रेकर्ड सुरु भएको थियो । तर हामीलाई प्रश्न सोध्ने अध्यासका लागि ६ः ३० बजे बालुवाटार बोलाइएको थियो । हामीले करिब १ः ३० मिनेट प्रश्न सोध्ने अभ्यास गरेका थियौं । अक्सफोर्डसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्ने साथीले पनि राम्ररी अभ्यास गर्नु भएको थियो । साझा सवाल कार्यक्रमका कर्मचारीले अभ्यास गराए बमोजिम नै प्रश्न गरिएको हो । कार्यक्रम समापन भएपछि सबैले मासु भात खाएर फर्किएको हो । तयसैले प्रश्नहरु एकदमै स्वतःस्फूर्त थिए भन्ने दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुल्याउने कुरा उपयुक्त होइन कि ? ’
सुरुचीले यो स्टाटस फेसबुकमा लेखेपछि यसको स्क्रिन सट भाइरल भएको छ । सुरुचीलाई विभिन्न मिडियाहरुले पछ्याएका छन् । स्टाटसले धेरै तनाव भएपछि यो स्टाटसलाई उनले अहिले प्राइभेट गरेकी छन् ।
अर्थात यो स्टाटस र स्टाटस पोस्ट गर्ने व्यक्ति ‘फेक’ होइन । तर सुरुचीलाई यो विषय अहिले टाउको दुखाइ भएको छ । यद्दपी मिडिया हरुले नै यसलाई प्रायोजित भनेर प्रचार गरेपनि कुनैपनि मिडियाले यस्ता बहस कार्यक्रम गर्नु अघि त्यसको पुर्व अभ्यास गर्ने परम्परा भने नया होइन तसर्थ यसरी गरिने अभ्यासलाई प्रायोजित भन्नु पनि न्यायोचित नहोला कि त?जुम एनपिबाच